လှေနံနှစ်ဖက်နင်းတဲ့ စစ်တပ်ဘောမ ယုန်လေးကို ထိမိပိုင်နိုင်တဲ့ စကားလုံးဖြင့် ဒဲ့ဆဲချလိုက်တဲ့ မင်းမော် ကွန်း။ – Shwe Nay Chi
ပရိသတ်ကြီးရေ ယုန်လေးဆိုတဲ့ ပါလေရာငါးပိချက်ကတော့ ပြန်ပေါ်လာပြန်ပါပြီနော်။ သူလုပ်သမျှတွေက လူတွေအဆဲခံရအောင်ကို တမင်လုပ်နေသလိုပါပဲနော်။ အခုလည်း မင်းသားမင်းမော်ကွန်းက သူ့ရဲ့လုပ်ရက်တွေကိုမျက်ဝါးထင်ထင်မြင်တွေ့လိုက်တာကြောင့် ထိမိစွာဖြင့် ဆဲလိုက်ပါပြီနော်။
ယုန်လေးကလည်း သူ့အပေါ်ဆဲဆိုနေတဲ့ မင်းမော်ကွန်းကို ဆ ရာကြီးလုပ်ကာ ပြန်ပြောလိုက်ပြန်ပါပြီနော်။ ” ဒါကျွန်တော် အချစ်ဆုံး အစ်ကို ထဲက တစ်ယောက်ကိုမင်းမော်ကွန်းပါ .ကျွန်တော့်ကို အမြဲတမ်းအားပေးတယ် .။
ငါတို့ အားလုံးရဲ့ မြေ သီချင်းတုန်းကလဲကွ ျန်တော့် ဘက်မှာ ရှိခဲ့တဲ့ အစ်ကိုပါ တခြားလူတွေ ဝိုင်းဆဲတာ ဘာမှမဖြစ်ဘူခံ နိုင်ရည်ရှိတယ် အရည်ထူနေပါပြီ ကိုယ်ချစ်တဲ့လူတွေ ဆဲတာတော့ စိတ်ထိခိုက်ပါတယ် .။
အစ်ကို ကျွန်တော် စိတ် ကို သိပါတယ် .ကျွန်တော့် ဘယ်သူ့ကို ဒုက္ခရောက်အောင်လုပ်ဖူးလို့လဲ.ပြောလို့ မကောင်း မပြောချင်တဲ့ အရာတွေကျွန်တော် တတ်နိုင်သလောက်ကူနေပါတယ် ။
ကူဖို့ကလည်း တစ်ချို့ တန်းလန်းတွေ ပါ .ပြောမှ သိတော့ မှာမို့လို့ ပြောရပါတော့မယ် .အနုပညာ သမားတိုင်းလိုလို ပါဝင်ခဲ့ကြပါတယ် ပါဝင်တဲ့ အနုပညာသမားတွေကို ကယ်စေချင်တာလားထောင် နှစ်ရှည်ကျတဲ့လူကျ . တောထဲ သေတဲ့လူသေ။
ဘဝ ပျက်တဲ့ လူပျက် . ပြီးတော့မှ .စစ်တပ်က ယုတ်မာခဲ့တဲ့ သူရဲကောင်းများဘွဲ့ဆိုပြီး ပေးစေချင်တာလား .အကုန် ပျက် စီးရာ ပျက်စီးကြောင်းကိုအားမပေးတာ ကျွန်တော် သိပါတယ် အခု သွေးဆူနေလို့ ဆိုတာလည်း သိပါတယ် ။
ဘာအလုပ်မှ လုပ်မရ အောင်အထိ ဘဝထိခိုက်သွားတယ်စိတ် ဓာတ်ထိုးကျ. သက်သေ ချင်စိတ်တွေ ဖြစ်တဲ့ အချိန်အစ်ကိုတို့ . ကျွန်တော် အချစ်ဆုံး တစ်သက်လုံးပ်ရှင် လောကရဲ့ ခေါင်း ဆောင် ဖြစ်သင့်တဲ့။
ဦးဌေး ( ဦးဇင်ဝိုင်း )အားပေးခဲ့တယ် . မြင့်မြတ် ကိုခင်လိူင် ကိုအယ်ကြီး နဲ့OG Crew ပိုင်တံခွန် . ထားပါတော့တစ် လောက လုံး နီးပါး သီချင်းကိစ္စမှာ အားပေးခဲ့ကြတယ်.။
တစ်ခုခု ဖြစ်မှာဆိုးလို့Personal အမုန်းတရားရှိသူတစ်ချို့ ပိုက်ဆံပေးပြီး လူကိုအန္တရာယ် ဖြစ်မှာ ဆိုးလို့ အနီးကပ် စောင့် ရှောက်ဖို့တပ်မတော်က လူကြီးမှာ လုံခြုံရေးပေးခဲ့တယ် .။
အနုပညာသမားတွေကြောင့်ရော အဲ့အားတွေကြောင့်ရော ပြန်ထ နိုင်ခဲ့တယ် ဘာ ဘောမှလည်း တစ်သက်လုံး မ မခဲ့ဘူးပါ .အရင်ကရော အခုထိရော မြေတစ်ကွက် . ဖုန်းတစ်လုံး မလျှေ ာက်ခဲ့ဖူးပါ . မရ ခဲ့ ဖူးပါ ။
ဒီ အရေးခင်းကြီးဖြစ်တော့ ကြားအညှပ်ဆုံးကကျွန်တော် ပါ . သီချင်းထဲက ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ စာသားမှာ အာဏာသိမ်းတာ တစ်ခု မှ မပါပါ .အခု အရေးခင်းမှာ ကျွန်တော်အိမ်မှာဝင်ပုန်းတဲ့လူတွေလုံခြုံတဲ့ နေရာကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် ပို့ပေးခဲ့ဖူးတဲ့ လူတွေမနည်းပါဘူး သိမှာပါ . ဒလန် ဆို နေရာ လိပ်စာ ပေးအောက်တန်းစား အလုပ်လုပ်မှာပေါ့ .။
အခု ကျွန်တော့်ကို သားလို ချစ်တဲ့ ဦးဇင်ဝိုင်းကျွန်တော်က လ ည်း အဖေလို ချစ်တဲ့ ဦးဇင်ဝိုင်းဆန္ဒပြဖို့ ၈ ရက်နေ့က အစည်းရုံးကို ကျွန်တော်လာမယ်ပြောတော့ ကျွန်တော် လာရင် တစ်ချို့ စိတ်ခုမှာ ဆိုးလို့ပြတ်ပြတ်သားသား မလာဖို့ ပြောခဲ့တာဦး ဇင်ဝိုင်း အဲ့အချိန်က စိတ်မကောင်းဖြစ်မိတယ် ။
ဒါပေမယ့် ချစ်ပြီးသားပါ .ကျွန်တော် နဲ့ မသိတဲ့ လူတွေတောင်ကျွန်တော် ကူညီနေတာ ကျွန်တော် နဲ့ရင်းနှီးတဲ့ လူ ချစ်ခင်တဲ့လူကို မကူညီဘဲ နေနိုင်ပါ့မလား .ကိုကျော် အစ်ကို အဖေ နဲ့ အ ဆက်သွယ်မရသေးလို့ဒီ လို အထင်ဆောင်းတာပါ။
ဘာကောင် မှ မဟုတ်ပေမယ့် နှုတ် ၏စောင်မခြင်းကြောင့်ဦးဌေးကို ဖမ်းတာ ၂၄ နာရီ မပြည့်ခဲ့ပါဘူး .ပြန်လွှတ်တာ ဦးဌေးက ပြန်ရင် ဒလန် အထင်ခံရမှာဆိုးလို့ ဧည့်ရိပ်သာမှာ အေးချမ် းစွာ နားနေပါတယ် . ဒါဝမ်းသာစရာပါ ။
ကျွန်တော့် သီချင်း ကိစ္စမှာ တစ်နှစ်ပိတ်တာဦးညီပါ ဦးဌေး မ ဟုတ်ပါဘူး .ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်မီမှာ တပ်ကို သွားပုပ်ခတ်တဲ့ မန့်တစ်ကြောင်းကြောင့်းညီညီ ထွန်းလွင်ကို ၅၀၅ ကပ်ဖို့ ပါပါတယ် ။
အကြိမ်ကြိမ် တောင်းပန်ပေးတာ ကျွန်တော်ပါ .ဦး ညီ ၅၀၅ မှာမပါတော့ပါဘူး . ကျွန်တော်ကူညီ ပြောဆို တောင်းပန်ခဲ့တာ ဦးညီ လည်း မသိခဲ့ပါဘူး .
ဒီ အရေးခင်းမှာ ရုပ်ရှင်လောကသားတွေကို ပြန်ဦးဆောင်တာ ဦးဌေးပါ .
ငွေ ကြေး စီးဆင်း မှုမရှိဘူး .ဘယ်သူ့ဆီက မှ CDM . CRPH အတွက် အလှူမခံထားတဲ့ အတွအသက်အရွယ်လည်းရနေတဲ့ အတွက်ရော .
ဦးဌေးကို ခဏထိန်း စစ်ဆေးတာ ၂၄ နာရီ မပြည့်ခဲ့ပါဘူး. နေ ာက်ချစ်လှစွာသော လူကြီးတစ်ယောက်လည်း ပြန်ရင် ဒလန် ဖြစ်မှာဆိုးလို့ မပြန်ရဲကျပါဘူး .
ကိုကျော်ကျော် ကိုယ်တိုင်လည်းပြေးနေရတာ ဖြစ်တဲ့ အတွက် တပ်က လူတွေ ဖမ်းပြီး အပြစ်မရှိလို့ ပြန်လွတ်တဲ့ အနုပညာရှင်တိုင်းကို
ဒလန် လို့ မစွတ်စွဲ ဖို့ မေတ္တာရပ်ခံ ပါတယ် .သူတို့လည်း တတ်နိုင်တဲ့ဘက်က တကယ်ကြီးကို အားထည့်ပြီး ပါဝင်ခဲ့ကျပြီးပြီလေ .
ဒုက္ခထပ်ရောက်စေချင်တာလား .အေးအေးချမ်းချမ်း ပဲ မြင်ချင်တာလား .စဉ်းစားပေးကျပါ .ထူးခြားကို စစ်ကား ၁၀စီးလောက်နဲ့ ပိတ်အဖမ်းခံရတာ
အားလုံး အားလုံးထပ် စောပါတယ် .နောက်တစ်နာရီ နေ ထပ်ပြီး ပြောပါမယ် .
ဒုက္ခရောက်တဲ့ လူတွေကို တတ်နိုင်တဲ့ဘက်ကရှိတဲ့ အားနဲ့ ကူညီနေတဲ့လူပါ .ဘယ်သူ့ကို ယုတ်မာ ဖူးလို့လဲ .” လို့ ပြန်လည်ချေပြထားတာပါ။
လှေနံနှစ်ဖက်နင်းတဲ့ စစ်တပ်ဘောမ ယုန်လေးကို ထိမိပိုင်နိုင်တဲ့ စကားလုံးဖြင့် ဒဲ့ဆဲချလိုက်တဲ့ မင်းမော်ကွန်း
ယုန်လေးကလည်း သူ့အပေါ်ဆဲဆိုနေတဲ့ မင်းမော်ကွန်းကို ဆရာ ကြီးလုပ်ကာ ပြန်ပြောလိုက်ပြန်ပါပြီနော်။ ” ဒါကျွန် တော် အချ စ်ဆုံး အစ်ကို ထဲက တစ်ယောက် ကိုမင်းမော်ကွန်းပါ .
ကျွန်တော့်ကို အမြဲတမ်းအားပေးတယ် .ငါတို့ အားလုံးရဲ့ မြေ သီချင်းတုန်းကလဲကျွန်တော့် ဘက်မှာ ရှိခဲ့တဲ့ အစ်ကိုပါ .တ ခြားလူတွေ ဝိုင်းဆဲတာ ဘာမှမဖြစ်ဘူးခံနိုင်ရည်ရှိတယ် အရည်ထူနေပါပြီ .
ကိုယ်ချစ်တဲ့လူတွေ ဆဲတာတော့ စိတ်ထိခိုက်ပါတယ် .အစ်ကို ကျွန်တော် စိတ် ကို သိပါတယ် .ကျွန်တော့် ဘယ်သူ့ကို ဒုက္ခ ရောက်အောင်လုပ်ဖူးလို့လဲ.
ပြောလို့ မကောင်း မပြောချင်တဲ့ အရာတွေကျွန်တော် တတ်နိုင်သလောက်ကူနေပါတယ် .ကူဖို့ကလည်း တစ်ချို့ တန်းလန်းတွေပါ .ပြောမှ သိတော့ မှာမို့လို့ ပြောရပါတော့မယ် .
အနုပညာ သမားတိုင်းလိုလို ပါဝင်ခဲ့ကြပါတယ် .ပါဝင်တဲ့ အနု ပညာသမားတွေကို ကယ်စေချင်တာလားထောင် နှစ်ရှည်ကျတဲ့လူကျ . တောထဲ သေတဲ့လူသေ.ဘဝ ပျက်တဲ့ လူပျက် . ပြီးတော့မှ .စစ်တပ်က ယုတ်မာခဲ့တဲ့ သူရဲကောင်းများဘွဲ့ဆိုပြီး ပေးစေချင်တာလား .
အကုန် ပျက်စီးရာ ပျက်စီးကြောင်းကိုအားမပေးတာ ကျွန်တေ ာ် သိပါတယ် .အခု သွေးဆူနေလို့ ဆိုတာလည်း သိပါတယ် .ဖြစ် စဉ်တိုင်းကို သေချာ စဉ်းစားရင်ရပါပြီ .
ပြည်သူ့ဘက်က ရှေ့ဆုံးက ပါခဲ့တဲ့ အနုပညာသားများကို အခုလို ဝရမ်းပြေး မအေးချမ်း ဘယ်သူ့မှ မဖြစ်စေချင်ဘူးမှတ်လ ား .
ကျွန်တော် သိပါတယ် . သူတို့ ပြန်အေးချမ်းဖို့ တောင်းဆိုထားပါတယ် . သူတို့အိမ် သူတို့ယာ
သူတို့ မိသားစုတွေနဲ့ ပြန်နေနိုင်ရင်လည်း ဒလန်လို့ မစွတ်စွဲဘဲ မုဒိတာ ပွားပေးဖို့ တောင်းဆိုပါတယ်။
သီချင်းတစ်ပုဒ် စည်းလုံး စေချင်လို့ ဆိုမိတယ် .
အဲ့က စလိုက်တာ နိုင်ငံရေး သမားတွေ လော်ဘီတွေရဲ့
ပစ်မှတ် နဲ့ စောင့်ကြည့်ခံ ဖြစ်သွားတယ် .ဘာအလုပ်မှ လုပ်မရ အောင်အထိ ဘဝထိခိုက်သွားတယ်
စိတ်ဓာတ်ထိုးကျ. သက်သေ ချင်စိတ်တွေ ဖြစ်တဲ့ အချိန်အ စ်ကိုတို့ . ကျွန်တော် အချစ်ဆုံး တစ်သက်လုံးရုပ်ပ်ရှင် လောကရဲ့ ခေါင်းဆောင် ဖြစ်သင့်တဲ့ဦးဌေး ( ဦးဇင်ဝိုင်း )အားပေးခဲ့တယ် . မြင့်မြတ် ကိုခင်လိူင် ကိုအယ်ကြီး နဲ့
OG Crew ပိုင်တံခွန် . ထားပါတော့တစ်လောက လုံး နီးပါး သီချင်းကိစ္စမှာ အားပေးခဲ့ကြတယ်.တစ်ခုခု ဖြစ်မှာဆိုးလို့
Personal အမုန်းတရားရှိသူတစ်ချို့ ပိုက်ဆံပေးပြီး လူကိုအန္တရာယ် ဖြစ်မှာ ဆိုးလို့ အနီးကပ် စောင့်ရှောက်ဖို့
တပ်မတော်က လူကြီးမှာ လုံခြုံရေးပေးခဲ့တယ် .အနုပညာသ မားတွေကြောင့်ရော အဲ့အားတွေကြောင့်ရော ပြန်ထ နိုင်ခဲ့တယ် .
ဘာ ဘောမှလည်း တစ်သက်လုံး မ မခဲ့ဘူးပါ.
အရင်ကရော အခုထိရော မြေတစ်ကွက် . ဖုန်းတစ်လုံး မလျှောက်ခဲ့ဖူးပါ . မရ ခဲ့ ဖူးပါ .
ဒီ အရေးခင်းကြီးဖြစ်တော့ ကြားအညှပ်ဆုံးကကျွန်တော် ပါ . သီချင်းထဲက ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ စာသားမှာ အာဏာသိမ်းတာ တစ်ခု မှ မပါပါ
အခု အရေးခင်းမှာ ကျွန်တော်အိမ်မှာဝင်ပုန်းတဲ့လူတွေ
လုံခြုံတဲ့ နေရာကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် ပို့ပေးခဲ့ဖူးတဲ့ လူတွေမနည်းပါဘူး သိမှာပါ . ဒလန် ဆို နေရာ လိပ်စာ ပေးအောက် တန်းစား အလုပ်လုပ်မှာပေါ့ .
အခု ကျွန်တော့်ကို သားလို ချစ်တဲ့ ဦးဇင်ဝိုင်းကျွန်တော်က လ ည်း အဖေလို ချစ်တဲ့ ဦးဇင်ဝိုင်းဆန္ဒပြဖို့ ၈ ရက်နေ့က အစည်းရုံးကို ကျွန်တော်လာမယ်ပြောတော့ .
ကျွန်တော် လာရင် တစ်ချို့ စိတ်ခုမှာ ဆိုးလို့ပြတ်ပြတ်သားသား မလာဖို့ ပြောခဲ့တာဦး ဇင်ဝိုင်း အဲ့အချိန်က စိတ်မကောင်းဖြစ်မိတယ် .
ဒါပေမယ့် ချစ်ပြီးသားပါ .ကျွန်တော် နဲ့ မသိတဲ့ လူတွေတောင်ကျွန်တော် ကူညီနေတာ . ကျွန်တော် နဲ့ရင်းနှီးတဲ့ လူ ချစ်ခင်တဲ့လူကို မကူညီဘဲ နေနိုင်ပါ့မလား .
ကိုကျော် အစ်ကို အဖေ နဲ့ အဆက်သွယ်မရသေးလို့ဒီ လို အထ င်ဆောင်းတာပါ .
ဘာကောင် မှ မဟုတ်ပေမယ့် နှုတ် ၏စောင်မခြင်းကြောင့်
ဦးဌေးကို ဖမ်းတာ ၂၄ နာရီ မပြည့်ခဲ့ပါဘူး .ပြန်လွှတ်တာ ဦးဌေးက ပြန်ရင် ဒလန် အထင်ခံရမှာဆိုးလို့ ဧည့်ရိပ်သာမှာ အေ းချမ်းစွာ နားနေပါတယ် . ဒါဝမ်းသာစရာပါ .
ကျွန်တော့် သီချင်း ကိစ္စမှာ တစ်နှစ်ပိတ်တာဦးညီပါ ဦးဌေး မဟုတ်ပါဘူး .ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်မီမှာ တပ်ကို သွားပုပ်ခတ်တဲ့ မန့်တစ်ကြောင်းကြောင့်
ဦးညီညီ ထွန်းလွင်ကို ၅၀၅ ကပ်ဖို့ ပါပါတယ် .အကြိမ်ကြိမ် တောင်းပန်ပေးတာ ကျွန်တော်ပါ .
ဦး ညီ ၅၀၅ မှာမပါတော့ပါဘူး . ကျွန်တော်ကူညီ ပြောဆို တေင်းပန်ခဲ့တာ ဦးညီ လည်း မသိခဲ့ပါဘူး . အရေးခင်းမှာ ရုပ်ရှင်လောကသားတွေကို ပြန်ဦးဆောင်တာ ဦးဌေးပါ .
ငွေ ကြေး စီးဆင်း မှုမရှိဘူး .ဘယ်သူ့ဆီက မှ CDM . CRP H အတွက် အလှူမခံထားတဲ့ အတွအသက်အရွယ်လည်းရနေတဲ့ အတွက်ရော .
ဒလန် လို့ မစွတ်စွဲ ဖို့ မေတ္တာရပ်ခံ ပါတယ် .သူတို့လည်း တတ် နိုင်တဲ့ဘက်က တကယ်ကြီးကို အားထည့်ပြီး ပါဝင်ခဲ့ကျပြီးပြီလေ .
ဒုက္ခထပ်ရောက်စေချင်တာလား .အေးအေးချမ်းချမ်း ပဲ မြင်ချင်တာလား .စဉ်းစားပေးကျပါ .
ထူးခြားကို စစ်ကား ၁၀စီးလောက်နဲ့ ပိတ်အဖမ်းခံရတာအား လုံး အားလုံးထပ် စောပါတယ် .နောက်တစ်နာရီ နေ ထပ်ပြီး ပြောပါမယ် .
ကျွန်တော် တစ်သက်လုံးဒုက္ခရောက်တဲ့ လူတွေကို တတ်နိုင်တဲ့ဘက်ကရှိတဲ့ အားနဲ့ ကူညီနေတဲ့လူပါ .
ဘယ်သူ့ကို ယုတ်မာ ဖူးလို့လဲ .” လို့ ပြန်လည်ချေပြထားတာပါ။